Mbola mitoetra ny fanjanahan-tany raha toa ka misy tany tokony ho an’ireo firenena ireo na iray metatra tora-droa aza mbola eo mbola eo ambany vahoan’ny Frantsay sy ny Anglisy, hoy io manam-pahaizana momba ny “droit public” io. Isan’ny mitana ny sain’ny maro tato ho ato rahateo ny momba ireo tany manodidina, toa ny Archipel de Chagos ifanolanan’ny Maorisianina amin’ny Britanika na koa ny Nosy Eparsa hifanolanan’ny Malagasy amin’ny Frantsay. Mayotte tokony ho an’ny Kaomorianina. Misy ny lalàna sy ny didy efa navoakan’ny fitsarana iraisam-pirenena. Ho an’I Madagasikara dia noresahina nandritra ny fihaonan’ny Filoha Rajoelina sy ny Filoha Frantsay Emmanuel Macron io, saingy tsy hita izay tohiny hatreto. Nambara fa hatsangana ny komity handinika ny raharaha, mety hisy ny fiaraha-mitantana,…